Posted by ညီရဲသစ် at 11:03
khin 26 January 2012 at 11:40
မမကျားတို.လည်း ၀န်ထမ်းဘ၀(၁၅)နှစ်လုံးလုံးလုပ်လာတာ ကိုယ်.အိတ်ထဲကတောင်စိုက်ရတာပါ၊ ရုံးသုံးစာရေးကရိယာတောင် ကိုယ်.ပိုက်ဆံနဲ. ကိုယ်ဝယ်၇တယ်လေ မမကျားကတော. ယောင်နောက်ဆံထုံးပါလို. ဒီကိုေ၇ာက်လာတာပါ။ အိမ်ဦးနတ်တွေတာ အဲဒါမျိုးဆို၇င် မောင်လေးပိုစ်မှာ ရေးသလိုဖြစ်ကုန်ကြပြီပေါ.။
ရိုးရိုးသားသား ဝန်ထမ်းလုပ်စားလို့ ကတော့ လျှာပေါ်မြက်ပေါက် သွားလိမ့်မယ်
Cameron 26 January 2012 at 14:48
ငယ်ငယ်တုန်းက အင်္ဂလိပ်စာအသင်ပြအရမ်းကောင်းတဲ့ ကိုယ်တို့ဆရာမတစ်ယောက်လည်းအဲလိုပဲ ကျောင်းကထွက်ပြီး နိုင်ငံခြားထွက်သွားလိုက်တာ ခုထိပြန်တွေ့ဖြစ်တော့ဘူး...။
နိုင်ငံခြားလာအလုပ်လုပ်ကြတာကို ဘာလို.ကျွန်ခံတယ် ပြောချင်ကြတာလဲ မသိဘူးနော် မြန်မာပြည်မှာဆိုလဲ ဝန်ထမ်းဆို သူများလက်အောက်လုပ်ရတာပဲ ဒီမှာလဲ သူများလက်အောက်ပဲလေ ရှင်းရှင်းပြောရရင် မြန်မာပြည်မှာမှ အထက်လူကြီးကို ကြောက်ရ ဖားရနဲ. ပြန်မပြောရဲနဲ. ဒိမှာက ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် ပြောလို.ရတယ် သူတို.ကလဲ ကိုယ.်အယူအဆကို လေးလေးစားစားနားထောင်တယ် ကျမလဲ မြန်မာပြည်မှာ ဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ.ပါတယ် ဖားရ ပေးရ စိတ်ကုန်လွန်းလို. မဟုတ်တာလဲ မလုပ်ချင်ဘူးလေ ကိုယ်.လိပ်ပြာက ကိုယ်.ကို ခြောက်နေမှာ ဒီမှာတော. ကိုယ်.လုပ်အား ကို အသိအမှတ်ပြုပြီးပေးတဲ. လုပ်အားခ အမှန်အကန်ဆိုတော. စိတ်ရှင်းတယ် ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်စေတယ်ပေါ.နော်
ညိမ်းနိုင် 26 January 2012 at 20:25
ပျော်ရွင်နေတဲ့ တောင်တန်းကြီးတွေကို မြင်ရတော့မယ်ထင်ပါရဲ့လေ........။
ချစ်စံအိမ် 26 January 2012 at 21:07
ဟုတ်ပါတယ် ကိုရဲရေ ဘယ်လိုပြောရမလဲသိတော့ဘူး
ဟီဟီ အကိုပြောသလိုပဲ :D
mstint 26 January 2012 at 22:55
Candy 27 January 2012 at 02:13
အစ်ကိုကတော့ တွေးတတ်တယ်နော်.. တွေးတတ်ဆို စာရေးဆရာကိုး.. ကဗျာဆန်လိုက်တာ ခေါင်းစဉ်ပေးထားပုံလေးက တောင်တန်းတွေတောင် ငိုဆိုပဲ.. :D
နေ၀သန် 27 January 2012 at 10:09
ပြောပြချင်တာလေးကို တိုတိုလေးနဲ့ထိနေအောင်ကို ဖော်ပြတတ်တယ်ဗျာ...။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ လုပ်အားနဲ့လစာမျှတတဲ့အချိန်လေးကို အမြန်ဆုံးတောင့်တနေမိတယ်....
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် 27 January 2012 at 13:56
ဘုန်းဘုန်းတောက် 27 January 2012 at 17:31
အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနေရတဲ့ လောကကြီးပါလား ကိုညီရဲရေ...တောင်တန်းတွေ ငိုမယ်ဆိုရင် ငိုကြရောပေါ့...
ပန်းချီ 27 January 2012 at 23:02
မြစ်ကျိုးအင်း 28 January 2012 at 03:22
ကိုယ့်ဝမ်းပူဆာ မနေသာ ဆိုသလိုပဲပေါ့။ အကျပ်အတည်းကြုံလာတော့လည်း မလုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ရတော့တယ်။ တော်သေးတာက လူကောင်းကနေ လူဆိုးမဖြစ်သွားလို့ပဲ။ တချို့တွေလည်း ဖြတ်လမ်းနဲ့ လမ်းမှားလိုက်ကုန်ကြမှာ ပေါ့လေ။ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေတွေ အာမခံချက်မရှိသ၍တော့ ဒီလို ရွေ့ပြောင်းမှုတွေ၊ ယိုစီးမှုတွေ ဆက်ဖြစ်နေမှာပဲ။ ကိုယ်တွေအပါအဝင်ပေါ့။
ညီလင်းသစ် 28 January 2012 at 09:03
အဲဒီလို တခြားရွေးစရာ လမ်းမရှိတော့လို့ နိုင်ငံခြားထွက်၊ ရပ်တည်ဖို့ 'ထွက်ရပ်' လမ်းကိုပဲ လိုက်သွားကြရတဲ့ ပညာတတ်တွေက ယိုစီးလို့ မကုန်နိုင် အောင်ပါပဲဗျာ..၊ လက်ရှိအချိန်ထိ ယိုစီးခဲ့တာတွေ အင်နဲ့အားနဲ့ ပြန်စီးဝင်မယ့်အချိန်ကိုပဲ စောင့်နေမိတော့တယ်...။
blackroze 29 January 2012 at 01:12
သူတွေအားလုံး ထွက်ရပ်ပေါက် ကုန်ကြတာပါဘဲ..
တချိန်မှာတော့ ပြန်လည် စီးဝင်နိုင်ပါစေလို့
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! 30 January 2012 at 01:02
ဟုတ်ပ အကိုရာ.... ဒါပေမယ့် အချိန်တန်ရင် လူတိုင်း အိမ်ပြန်နိုင်ကြဖို့ ကြိုးစားကြရမှာပဲလေ...
အင်ကြင်းသန့်2February 2012 at 16:14
San San Htun6February 2012 at 14:51
မြန်မာပြည်မှာ ဝမ်းဝရင် နိုင်ငံခြား ဘယ်ထွက်ကြတော့မှာလဲ..နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ပင်ပန်းပါဘိ..